merolagani - विश्वव्यापी करका कुराहरु किन पुनः एजेन्डा बन्न पुग्यो?
विश्वव्यापी करका कुराहरु किन पुनः एजेन्डा बन्न पुग्यो?
Apr 13, 2021 08:57 PM Merolagani
नयाँ अमेरिकी प्रशासनले व्यापार करलाई सुधार गर्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रयासहरुलाई नयाँ प्रोत्साहन दिएको छ।
राष्ट्रपति जो बाइडेन र उनका कोष सचिव जेनेट येलेनको नेतृत्वमा अमेरिका, वार्तामा अडिएका दुई मुख्य क्षेत्रहरुतर्फ अघि बढेको छ।
एक, कर्पोरेट नाफाका लागि न्यूनतम कर दर रहेको छ भने अर्को अमेरिकाले पहिले लगाउन खोजेको डिजिटल सेवा करमा छुट।
२०२१ को मध्यमा भएको विश्वव्यापी सम्झौताको लक्ष्य अब अधिक विश्वसनीय देखिन्छ।
आर्थिक सहकारिता र विकास संगठन (ओईसीडी) को माध्यमबाट समन्वय गरिएको सो वाताले कर्पोरेट कर सुधार गर्ने अघिल्लो कामको बारेमा सोचिरहेको छ।
ओईसीडीका आफ्नै सदस्य देशहरुभन्दा परका वार्ताहरु उनीहरुले भनेका दुई खम्बाहरुको वरिपरि आयोजना गरिएको छ। यी दुबै मुद्दाहरुको सबै प्रकारका बहुराष्ट्रिय व्यवसायमा असर परेको छ, तर ती विशेष रुपमा केही प्राविधिक व्यवसायको सम्बन्धमा गम्भीर छन्।
पहिलो हो, देशहरुमध्ये कर तिर्नुपर्दा मुनाफा वा राजस्व कसरी छुट्याउने?
डिजिटल प्रविधि यसलाई यति धेरै व्यवहारिक बनाउँदछ कि कुनै देशसँग वाणिज्य सम्बन्ध राख्नुपर्दछ, र यसबाट पैसा कमाउँदछ, कुनै पनि प्रकारको शारीरिक उपस्थिति बिना।
त्यसैले, बहस भनेको यो सुनिश्चित गर्नु हो जसलाई ब्रिटिश सरकारको परामर्श कागजातले ‘हाम्रा महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवालाई समर्थन गर्न उचित योगदान’ भनेर चिनिने सबै प्रकारका व्यवसायले भुक्तानी गर्दछ।
ओईसीडीमा एक सम्झौताको अनुपस्थितिका कारण युके सहितका केही मुलुकहरु आफ्नै डिजिटल सेवा करहरुसहित अगाडि बढेको छ।
बेलायतले अनलाइन बजार, सामाजिक मिडिया र इन्टरनेट सर्च इन्जिनबाट लिइएको राजस्वमा २ प्रतिशत कर लागु गर्दछ। बेलायत र अन्य केही देशहरुले ‘उपयुक्त अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता भएको खण्डमा एकतर्फी कर बन्द गर्ने वाचा गरेका छन्।
यस्तो सम्झौताको हरेक प्रगतिमा बाधा पुर्याउने एक कारक अमेरिकालाई ‘सुरक्षित बन्दरगाह’ प्रावधान भनेर चिनाउने आग्रह थियो। आलोचकहरुले यसलाई कर वैकल्पिक बनाउने रुपमा वर्णन गरे जुन ट्रम्प प्रशासकका अधिकारीहरुले अस्वीकार गरेका थिए।
वास्तवमा अमेरिकाले फाइनान्सियल टाइम्सले एक प्रणालीको सक्रियताका साथ प्रस्ताव गरेको रिपोर्ट गरिएको छ जसमा बहुराष्ट्रियहरुले प्रत्येक देशमा उनीहरुको बिक्रीमा आधारित कर तिर्ने छन्–बेलायत र अन्य एकतर्फी कर जस्ता सामान्य सिद्धान्तहरु सहित। फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार, केबल धेरै ठूला फर्महरु अमेरिकी प्रस्ताव अन्तर्गत यी कर व्यवस्थाको अधिनमा हुनेछन्।
भनिन्छ, त्यहाँ जटिलभन्दा पनि वार्तामा छलफलका लागि विभिन्न फरक फरक विचारहरु छन्। उनीहरुले देशीय कम्पनीले राजस्व पाउने देशहरुमा निश्चित आधारभूत स्तरभन्दा बाहिर नाफा छुट्याउनेछन्।
दोस्रो खम्बा विश्व न्यूनतम कर्पोरेट कर दर हो। यदि त्यसलाई व्यापक रुपले लागु गरिएको थियो भने यो प्रोत्साहनलाई कमजोर गर्दछ कि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले आफ्नो लाभलाई त्यस स्थानमा स्थानान्तरित गर्नुपर्दछ जहाँ करको दर कम छ।
ट्रम्प प्रशासन यसको विपरित थियो। तर, अहिले अमेरिका त्यसको पक्षमा छ। यलेन भन्छिन्, ‘यसले कसले छिटो र कर्पोरेट दरलाई कम गर्न सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्नेछ।’
अमेरिकाको अवस्था किन परिवर्तन भयो। बाइडेन प्रशासनको पूर्वाधारमा धेरै खर्च गर्ने ठूला कार्यक्रमहरु समावेश छन्, परम्परागत, जस्तै, बाटो, पुल तथा पोर्ट, र आधुनिक, ब्रोडब्याण्ड र निश्चल उर्जा।
राष्ट्रपति र उनका कोष सचिव धेरै मात्रामा उच्च कर्पोरेट कर दरसहित लगानी गर्न चाहन्छ। एक अन्तरराष्ट्रिय सम्झौताले अन्य देशहरुलाई लोभ्याउने र अमेरिकी कम्पनीहरुलाई अमेरिकामा छनौट गर्न लोभ्याउन सक्छ।
करमा अन्तरराष्ट्रिय सम्झौताको लामो इतिहास छ। विगतमा, उद्देश्य ‘दोहोरो कर’ रोक्ने प्रवृत्ति थियो, उही समान आय, व्यक्तिगत वा व्यवसाय, दुई पटक अलग क्षेत्रधिकारमा कर लगाइएको थियो।